Vietnam dia mandefa sidina Taipei, Singapore ary Hong Kong avy any Da Nang
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Vietnam dia mandefa sidina Taipei, Singapore ary Hong Kong avy any Da Nang
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Hong Kong • Vaovao • Fandefasana gazety • Vaovao Mafana Singaporeana • Vaovao Mafana Taiwan • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany • Vaovao Mafana Vietnam
Desambra 23, 2019
Vietjet dia nanomboka serivisy telo mampifandray an'i Da Nang amin'ireo ivon-toerana lehibe manerantany - Taipei, Singapore ary Hong Kong.
Ireto zotra vaovao ireto dia antenaina hanomezana mpizahatany vietnamiana sy iraisam-pirenena fotoana mora handehanana mora tsy ho any Da Nang, tanàna amoron-tsiraka afovoany Vietnam ihany, fa hatrany Indochina sy ny faritra Azia atsimo atsinanana. Vietjet dia miasa amin'ny lalana iraisam-pirenena sy an-toerana 12 mankany sy avy any Da Nang.
Ny lanonam-panidinana voalohany dia natao tany amin'ny toerana rehetra nisy ny fanatrehan'ny filoha lefitra Vietjet Do Xuan Quang teny an-tanana handray ireo mpandeha voalohany tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Da Nang avy any Taipei sy Singapore. Tamin'ny sidina voalohany, faly ireo mpandeha nahazo fanomezana mahafinaritra avy amin'ny ekipa mpandeha.
Ny làlana Da Nang - Taipei dia miasa isan'andro manomboka amin'ny 19 Desambra 2019 amin'ny alàlan'ny fiaramanidina A320 / A321 vaovao sy maoderina. Miala avy any Da Nang amin'ny 10:50 ny sidina ary tonga ao Taipei amin'ny 14:30. Ny sidina miverina dia miainga avy any Taipei amin'ny 15:30 sy midina ao Da Nang amin'ny 17:30 (Reina amin'ny ora eo an-toerana). Tao anatin'ny adiny telo fotsiny dia vonona ny mpandeha hijery an'i Taipei - iray amin'ireo tanàna be olona indrindra ao Azia.
Ny làlana Da Nang - Singapore dia miasa isan'andro manomboka amin'ny 20 Desambra 2019 miaraka amin'ny faharetan'ny sidina 2 ora 40 minitra isaky ny tongotra. Miala avy any Da Nang amin'ny 12:20 ny sidina ary tonga any Singapour amin'ny 15:55. Ny sidina miverina dia miainga avy any Singapore amin'ny 10:50 ary midina ao Da Nang amin'ny 12:30 (Reina amin'ny ora eo an-toerana). Vietnamjet izao dia manana zotra telo mampitohy an'i Vietnam sy Singapour, ao anatin'izany ny Hanoi / HCMC / Da Nang - Singapore izay misy sidina efatra isan'andro.
Ny lalana Da Nang - Hong Kong dia miasa isan'andro manomboka amin'ny 20 Desambra 2019 miaraka amin'ny faharetan'ny sidina 1 ora 45 minitra isaky ny tongotra. Avy any Da Nang ny sidina amin'ny 12:45 ary tonga any Hong Kong amin'ny 15:30. Ny sidina miverina dia miainga avy any Hong Kong amin'ny 17:20 ary midina ao Da Nang amin'ny 18:05 (Rehetra amin'ny ora ao an-toerana). Vietjet dia miasa amin'ny lalana telo izao mampitohy an'i Vietnam sy Hong Kong, ao anatin'izany ny HCMC / Phu Quoc / Da Nang - Hong Kong miaraka amin'ny sidina telo isaky ny sidina.
Vietnamjet dia mpanakalo lalao, mamorona revolisiona amin'ny indostrian'ny fiaramanidina vietnamiana, mandray anjara amin'ny fampandrosoana toekarena sy fizahan-tany eo an-toerana amin'ny tanjon'ny tamba-jotra. Ny fiaramanidina Vietjet dia nolokoina niaraka tamin'ny lokon'ny saina Vietnamianina, mitondra ny mariky ny fizahan-tany ary ny manidina miaraka amin'ny hira Hello Vietnam dia maneho tanteraka ny sarin'ny firenena, ny natiora ary ny olona ho an'ny namana any amin'ny kaontinanta dimy. Manerana ny tanjona iraisampirenena mihoatra ny 80 any Malezia, Sina, India, Japon, Korea atsimo, Thailand, Singapore ary Indonezia izany.
Amin'ny maha-kaompaniam-bahoaka azy dia manokatra làlana vaovao tsy tapaka i Vietjet hitondrana fotoana manidina bebe kokoa amin'ny vidiny mirary ho an'ny rehetra. Miaraka amin'ny fanahin'ny soatoavina “fiarovana, fahasambarana, fahaiza-mividy ary fahaizan'ny fotoana mahamety”, i Vietnamjet tamim-pireharehana dia namorona traikefa manidina tsy hay hadinoina ho an'ireo mpandeha amin'ny fiaramanidina vaovao misy seza milay, safidy iray sakafo mafana matsiro sivy karakarain'ny ekipa tsara tarehy sy sariaka ary koa maro hafa serivisy fanampiny maoderina amin'ny sehatra e-varotra.